Ukuphulukisa amakristalu empeleni kusebenza? Isibuyekezo esisha esisha 2021
Uma ungene ezweni lomuthi ohlukile, kungenzeka ukuthi uke wezwa ngamakristalu. Igama elinikezwe amanye amaminerali, njenge-quartz, noma i-amber. Abantu bakholelwa ezakhiweni zezempilo ezizuzisayo.
Ukubamba amakristalu noma ukuwabeka emzimbeni wakho kucatshangwa ukuthi kukhuthaza ukuphulukiswa ngokomzimba, ngokomzwelo nangokomoya. Amakristalu kuthiwa enza lokhu ngokusebenzisana kahle nenkundla yamandla omzimba wakho, noma i-chakra. Ngenkathi amanye amakristalu okuphulukisa kufanele anciphise ukucindezeleka, amanye kuthiwa athuthukisa ukugxila noma ubuciko.
Izici zezempilo ezingaqondakali zokuphulukisa amakristalu
Ngokumangazayo, abacwaningi benze izifundo ezimbalwa ezijwayelekile kumakristalu. Kodwa eyodwa, eyabuyiselwa emuva ngonyaka we-2001, yaphetha ngokuthi amandla alawa amaminerali “asesweni lombukeli.”
E-European Congress of Psychology eRoma, abantu be-80 bagcwalisa uhlu lwemibuzo eyenzelwe ukulinganisa izinga labo lenkolelo ezenzakalweni zomzimba. Kamuva, iqembu lokucwaninga lacela wonke umuntu ukuba acabangisise imizuzu emihlanu. Ngenkathi uphethe i-quartz yangempela crystal noma i-crystal counterfeit eyenziwe ngeglasi.
Ngemuva kwalokho, ababambiqhaza baphendule imibuzo mayelana nemizwa ababezizwa ngayo ngenkathi bezindla ngamakristalu okuphulukisa. Womabili amakristalu wangempela namanga akhiqize imizwa efanayo. Futhi abantu abavivinywe kakhulu kwimibuzo yemibuzo yenkolelo eyejwayelekile babhekana nemizwa emikhulu kunaleyo ehlekisa nge-paranormal.
“Sithole ukuthi abantu abaningi bathi bangazizwa bengajwayelekile. Ngenkathi ubambe amakristalu, njengokushoshozela, ukushisa nokudlidliza. Ukube besibatshele kusengaphambili ukuthi yilokhu okungenzeka kwenzeke, ”kusho uChristopher French, uprofesa wesayensi yezengqondo eGoldsmiths, eNyuvesi yaseLondon. "Ngamanye amagama, imiphumela ebikiwe ingumphumela wamandla okusikisela, hhayi amandla amakristalu."
Ucwaningo oluningi lukhombisa ukuthi umphumela we-placebo ungaba namandla kangakanani. Uma abantu bakholelwa ukuthi ukwelashwa kuzobenza bazizwe bengcono. Abaningi babo bazizwa bengcono ngemuva kokuthola ukwelashwa. Noma ososayensi bafakazele ukuthi ngokwelashwa akusizi ngalutho.
Ukuthatha kwakhe yilokho ongakulindela kusosayensi. Futhi yebo, kucishe kunembile ukusho ukuthi amakristalu awazitholi izakhiwo zempilo eziyimfihlakalo ezibhekiswe kubo ngabasebenzisi.
Kodwa ingqondo yomuntu iyinto enamandla, futhi kunzima ukusho ngokusobala ukuthi amakristalu awasebenzi, uma uchaza “umsebenzi” njengokunikeza inzuzo ethile.
“Ngicabanga ukuthi umbono womphakathi nabezokwelapha nge-placebo yinto ewumbombayi noma engumbombayi,” kusho uTed Kaptchuk, uprofesa wezokwelapha eHarvard Medical School. Kodwa ucwaningo lukaKaptchuk nge-placebo lukhombisa ukuthi izindlela zalo zokwelapha zingaba "ngeqiniso" futhi "ziqine". Ngenkathi engafundanga amakristalu, futhi ngeke aphawule ngokusebenza kwawo noma yini ephathelene neminye imithi. UKaptchuk ubhale ukuthi ukwelashwa okwakhelwe ngaphakathi kwe-placebo kungathathwa njengesici esihlukile sokusebenza kwayo, nokuthi izinzuzo ezibangelwa yi-placebo kufanele zikhuthazwe, zingachithwa.
Odokotela abaningi bayakholelwa emandleni e-placebo. Ucwaningo lwe-BMJ lwango-2008 luthole ukuthi cishe uhhafu wodokotela abahlolisisiwe babike ukuthi basebenzise izindlela zokwelapha ze-placebo ukusiza iziguli zabo. Imvamisa, udokotela uncoma okwehlisa amaphilisi okuthenga noma i-vitamin supplement. Noma kungakhonjiswanga izimpawu zesiguli. Iningi libheke umkhuba wokunquma ukwelashwa kwe-placebo njengokuvumelekile ngokokuziphatha, ababhali baphetha kanjalo.
Ukubamba amakristalu okuphulukisa, kunjalo, akufani nokugwinya i-Advil. Ungalindeli ukuthi udokotela wakho ancoma amakristalu ekuvakasheni kwakho okulandelayo. Ngokombono wemithi ejwayelekile kanye nesayensi esekwe ebufakazini, ucwaningo olukhona lukhombisa ukuthi afana namafutha enyoka. Kodwa ucwaningo ngomphumela we-placebo luveza ukuthi ngisho no-oyela wenyoka angaba nezinzuzo kulabo abakholwayo… funda kabanzi >>
iqoqo lethu lamatshe amatsheizitolo zethu zemvelo esitolo